साईप्रसमा कमाएको ४० लाख लिएर अर्कै युवतीसंग रं गेहात पक्रा उ, श्रीमानको घर पुग्दा हात हालाहाल । (भिडियो हेर्नुस्) – Khabar28media
साईप्रसमा कमाएको ४० लाख लिएर अर्कै युवतीसंग रं गेहात पक्रा उ, श्रीमानको घर पुग्दा हात हालाहाल । (भिडियो हेर्नुस्)
September 2, 2021 - by Vikash - LeaveaComment
साईप्रसमा कमाएको ४० लाख लिएर अर्कै युवतीसंग रंगेहात पक्रा उ, श्रीमानको घर पुग्दा हात हालाहाल । (भिडियो हेर्नुस्) यो समाचारलाई अन्तिममा राखिएको छ पुरा हेर्नुहोला, यो अर्को खबर पनि पढ्नुहोस् !! दुई महिना अघि विवाह गरेकी श्रीमतीले २५ लाख रुपैया लिएर वेपत्ता भएपछि श्रीमान र
उनक परिवार बेहुलीको खोजीमा लागेका छन् । झापा दमक–१ स्थित हवल्दार चौकका राजु न्यौपानेसँग विवाह गरी आएकी एक युवती विवाह भएको दुई महिनामै भएको दुई महिनामै २५ लाख बराबरको सम्पत्ति लिएर बेपत्ता भएकी हुन् ।
गत असार १५ गते विवाह गरेकी २४ वर्षीया तारा बाँस्तोला (न्यौपाने) ले २५ लाख बराबरको सम्पत्ति लिएर बेपत्ता भएको बेहुलाको परिवारको आरोप छ । घरमा कोही नभएको समयमा असोज ३ गते विपत्ता भएको परिवारका सदस्यको आरोप छ । घरमा सासु निदाएको बेलामा युवतीले धनमाल लिएर बेपत्ता भएकी हुन् । उनी दमक–६ मा
रहेको पसल आउँछु भनी फोनमा ताराले श्रीमानलाई जानकारी गराएकी थिइन् । युवतीले १२ तोला सुन, १२ लाख रकम र अन्य सामान लिएर वेपत्ता भएको परिवारले जनाएको छ । उनले घरमा एउटा पत्र समेत छोडेर गएको श्रीमान् न्यौपानेले बताएका छन् ।
पसल आउँछु भनी फोनमा भनेकी श्रीमती बेलुकासम्म पसल नआएपछि उनीहरुले खोजी सुरु गरेका थिए । त्यतीबेला उनीहरुले पत्र फेला पारेका हुन् । श्रीमान न्यौपानेले सम्पर्क गर्दा दमककै एउटा ब्युटी पार्लरमा कपाल स्टेट र कलर गरेर पसल आउँछु भन्दै अन्तिम म्यासेज गरेको उनको भनाई छ ।
गत असार १५ गते विवाह गरेकी २४ वर्षीया तारा बाँस्तोला (न्यौपाने) ले २५ लाख बराबरको सम्पत्ति लिएर बेपत्ता भएको बेहुलाको परिवारको आरोप छ । घरमा कोही नभएको समयमा असोज ३ गते विपत्ता भएको परिवारका सदस्यको आरोप छ । घरमा सासु निदाएको बेलामा युवतीले धनमाल लिएर बेपत्ता भएकी हुन् ।
श्रीमती ताराले छोडेको चिठ्ठीमा लेखेकी थिइन्– ‘मैले आफ्नो सुर गरे । म पत्रकार पृतम भट्टराईसँग गइसकेकी छु, ३ वर्षदेखि अफयेर चलिरहेको थियो । मेरो शरीरभित्र उसको रगत र उसको शरीरभित्र मेरो रगत छ, त्यसैले मलाई नखोज्नुहोला’ ।
भगाउने केटा पृतम भट्टराई कान्तिपुर पब्लिकेशनमा काम गर्ने बताइएको छ । पृतमले पनि आफु र तारालाई खोजी नगर्नु भन्दै धम्कीपूर्ण म्यासेज पठाएको बताइएको छ । भगाउने केटा पृतम भट्टराई कान्तिपुर पब्लिकेशनमा काम गर्ने बताइएको छ । पृतमले पनि आफु र तारालाई खोजी नगर्नु भन्दै धम्कीपूर्ण म्यासेज पठाएको बताइएको छ ।
Previous Article मध्यराति के भयो यस्तो ? पहाड नै खसेर बगायो घर ४ बर्षीय बालक, हेर्नुस्। (भिडियो सहित)
Next Article सिद्धार्थको निधनपछि प्रेमिका शहनाजको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रियो